Waldaa Wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa – Welcome to bilisummaa
waldaa mirga ummata Oromoof qabsaawuf dhaabbate. Dhaabbanni kun leellistoota Oromummaa kan akka Maammoo Mazammir, Hayila maariyaam Gammada fi Taaddasaa Birruu faatin dhaabbate. Waldaan kun maqaa kan kan argate gosoota Oromoo gurguddoo lama kan Maccaa fi Tuulama jedhamanirraayi. Waldaan Macaa fi Tuulamaa kan dhaabbate bara 1960n keessa yoo ta’u kaayyoon isaas eenyummaa Oromoo gabbisuu fi mirga Oromoof qabsaawuuf ture.
Waldaa Wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa magaalaa Finfinnee keessatti Gullalleetti bara 1963 hundeeffame. Koloneel Alamuu Qixxeessaa dura ta’aa waldaa kanaa ta’ee waggaa dheeraaf tajaajilaa ture.
‪#‎Damee‬ Adda Addaa Banuu
Warri bulchaa kutaa-biyyaa Arsii, waa’ee walga’ii kanaa erga dhaga’anii booda akka hin geggeeffamne waan hin barbaadneef Haaji Roobalee Turoo fi namoota walga’ii kana qindeessan hidhan. Haa ta’u malee, hoggantoonnii muummee kan Finfinnee jiran haaluma beellamaatin Dheeraa deemuf kutatan. Haaluma kanaanis koreen hoggantootaa Dheeraa seenan. Ummanni Arsii hedduunis ba’anii jila Finfinneedhaa dhufe kana haala hoo’adhaan simatan. Walga’ichis haaluma karoorfameen adeemsifamee kaayyoon waldaa kanaa ummataaf ibsame.
Sochii waldaa kanaa kan sodaate mootummaan gabroomfata Hayilasillaasee, waldaa akka hin sochoone bara 1966 dhorke. Hoggantootaa fi miseensota waldaa kanaa kan Finfinnees ta’e kan kutaa-biyyaarra jiran qabee mana hidhaatti naqe, mana murtiittis himannaa irratti bane. Galmeen himannaa hoggantootarratti baname bakka sadi’itti qoodama. Gareen tokkoffaan: Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, Seefuu Tasammaa, Daadhii Fayyisaa, Lammeessaa Boruu, Qanyaazmaach Mokonnin Wasanuu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Birgaader Jeneraal Daawit Abdii fa of keessatti qabata.
Garee lammaffaan ragaa sobaa ta’anii garee tokkoffaa keessa namoota jiranirratti ragaa akka ba’an mootummaan yaalee ture. Garuu isaan kana fudhachuu didnaan isanirrattis himanni baname. Gareen kun Taaffasaa Gammachuu, Tasfaayee Dagaagaa, Baqqalaa Mokonnin, loltuu Hayilamaariyaam Dimaanaa, fiixumaa Hiikaa faa of keessatti qabata.
Garee sadaffaan jalqaba mana murtii Baaletiin himataman. Boodarra garuu gara mana hidhaa Finfinneetti ol dabarfamana. Gareen kun Fitawuraarii Ahimad Imaamaa, Haaji Aadama Saaddoo Sheekaa, Giraazmaach Umar Huseen, Qanyazmaach Abuubakar Dargaa, Aliyyii Ahimad, Qaasim Huseen, fi Hasan Jimmaa faadha.
‪#‎Sochii‬ Amma Irra Jiru
Waldaan WMT erga mootummaan ADWUI akka hin sochoone dhorkee booda biyya keessatti socho’aa hin jiru. Haa ta’u malee, yeroo ammaa deebi’e biyya Ameerikaatti of ijaarudhaan sochii gara agaraa gochaa jira.
Qabsoo farra diddaa gabrummaa Oromoo keessatti WMT ga’ee guddaa ba’e. Namoonni boodarra ABO hundeessan baayyen isaanii miseensota WMT kan turan yoo ta’u hundeeffama ABOf haala mijeesse. Kana malees, Oromoo dadammaqsee aadaa fi afaan isaatin akka boonu gochuuf shoora olaanaa ba’e.
Previous The Tigrayan fascist genocidal war against the Oromo women and children
Next Dhukkubni KINTAAROOTII (hemorrhoids) maalii ?mallattoon isaahoo ? furmaata akkamiitu kennamuufii danda’aa?